Fanontaniana mahazatra - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Miaraka amin'ny fanitarana tsy tapaka ny refin'ny orinasa dia manana mpiara-miasa marobe ny AKF. Manome fanampiana bebe kokoa an'ireo mpiara-miasa aminy ny orinasa, manantena fa ny mpiara-miombon'antoka AKF sy ireo mpiara-miasa amin'ny AKF dia afaka manome serivisy tsara kokoa ho an'ireo mpampiasa indostria.
Ny vokatra marika AKF anay dia nahavita ny mari-pahaizana CEand FDA. Ankafizo ny laharam-pahamehana amin'ny varotra.
Ny orinasa dia mitarika orinasa fampiroboroboana marika amin'ny haino aman-jery lehibe.
Ankafizo ny rafitra bonus an'ny teboka fivarotana agents isam-bolana. Ankafizo ny serivisy aorian'ny varotra toy ny fiverenana sy ny fifanakalozana entana (momba ny antsipiriany, azafady mba jereo ny fitsipika miverina sy mifanakalo)
Fanohanana ho an'ny mpanjifa VIP:
Ny foibe dia manome ny sanda, ny rafitra, ny fizotrany ary ny fandraisana mpiasa na ny mason-tsivana fanabeazana ho an'ny mpanjifa VIP ho an'ny mpiara-miasa. Ny foibe dia tompon'andraikitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiasa mpiasan'ny serivisy mba hampiasa tsara ireo vokatra sy ny fomba fampiasana ny maodely fanarahan-dia an'ny mpampiasa.
Ny faritra rehetra izay mpitantana ny serivisy ho an'ny mpanjifa any amin'ny foibe dia hanaraka sy hitarika ary hanome valiny ary hiatrika ireo olana amin'ny fotoana rehetra.
Ny fametrahana ny rafitra sy ny fizotran'ny tombony ho an'ny mpanjifa VIP ary Ampiharo ireo mekanisma sy fizotran'ny tombom-barotra rehetra ireo.
Fanohanana fanofanana momba ny vokatra Fiofanana momba ny sandan'ny vokatra Fiofanana momba ny fiasan'ny vokatra
Mametraka fanontaniana matetika Fiofanana momba ny varotra sy ny fitantanana Fiofanana sarobidy ho an'ny ekipa orinasa mpandraharaha
Manasokajy ny fizotry ny asa ataon'ny agents sy ny fampiofanana azy ireo.
Fanofanana momba ny fahaiza-mivarotra ho an'ny mpiasa mpiasa. Varotra FAQ sy ny tena simika ady amin'ny sehatra dokam-barotra manan-tsaina fifandraisana mora.
Fananganana ekipa mahomby. Ny fahaizana sy ny fiofanana amin'ny Sales Manager mahay.
Ny firafitry ny ekipa sy ny firafitry ny tombony amin'ny fifaninanana
Fampirantiana sy fanohanan'ny Vovonana:
Ny foiben'ny foibe dia miara-miasa amin'ny maso ivoho mba hanovozana ny hevitra sy ny dingan'ny drafitra rehetra!
Ireo mpandraharaha dia afaka mangataka ny fanohanany, ny foibe dia handamina mpiasa mifandraika amin'ilay tranonkala ankehitriny hanohanana ny asany.
Ny tena tanjon'ny fampirantiana sy ny vovonana fihaonambe dia ny fanatsarana ny fametrahana ny dabilio marika eo an-toerana ny marika sy ny maso ivoho misoratra eo an-toerana.
Fanohanana amin'ny doka sy fampiroboroboana
1.Ny foibe foibe dia manome fanohanana dokam-barotra ho an'ny tsena nasionaly, ao anatin'izany ny fampirantiana, doka amin'ny haino aman-jery, forum, sns
2.Araka ny dingana fampandrosoana eo amin'ny tsena isam-paritra, ny foibe dia hanome fanohanana dokam-barotra sy valisoa ho an'ny mpandraharaha araka ny fahombiazan'ny varotra nataon'ny agents.
3.Ny foibe dia hametraka valisoa samihafa amin'ny agents rehetra
4. mifanaraka amin'ireo hetsika fampiroboroboana miorina amin'ny hetsika
5.tanin'ny maso na ekipa nasionaly na isam-paritra.
6. Ny fidirana amin'ny Agent sy ny fizotran'ny Operation
1. Fenoy ny taratasy fangatahana
2. Famerenana sy fankatoavana avy amin'ny foibe
3. Fifanarahana sy fandoavam-bola an'ny maso ivoho
4. Mametraka sehatra mpandraharaha.
5. Famoahana zon'ny vokatra marika AKF
6. Manome fampahalalana momba ny tahiry sy ny vokatra
Satroboninahitra fanivanana AKF
AKF sofina manao sarontava fitsaboana Akanjo ahazoana aina ary miaro tena
Mitafy fampiononana Areti-mifindra vonjy maika Sarontava fitsaboana Anti Smog Porofon'ny vovoka Fisorohana ny PM 2.5
Olona mifandray amin'ny fampiasam-bola:
Laharana telefaona: 0755-82778177 Miss Yang
Adiresy: A-701, tranobe Yin dong, No. 25, Shi hua Road, Zone Trade Free Futian, Shen Zhen
Tranokala: https: // www.ikouzhao.cn